Life Style Archives - Amawpyay
ဘယ္လိုမွမတတ္ႏိုင္ေပမယ့္ စိတ္ညစ္စိတ္ပ်က္ေနစရာမလိုတဲ့ အခ်က္ (၁၀)ခ်က္ စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔ ေဆြးစရာမရွိတဲ့….ဘဝမွာ ဘယ္လိုမွမတတ္ႏိုင္တဲ့ဲ အခ်က္၁၀ခ်က္ ဘဝထဲက ဘယ္လိုမွမတတ္ႏိုင္တဲ့ (၁၀)ခ်က္။ ၁။ သင့္ကိုခြဲသြားတဲ့သူ သင့္ကိုခြဲသြားတဲ့သူက သင့္ကိုဆုံးရႈံးသြားတာ… သင္က သူ႔ကိုဆုံးရႈံးသြားတာမဟုတ္ဘူး၊ သူခြဲခြာသြားတာက ေနာက္တစ္လမ္းက အခုေလွ်ာက္ေနတဲ့လမ္းထက္ေကာင္းလို႔ ေ႐ြးျခယ္လိုက္တာ။ “ ခြဲခြာျခင္းက အသက္ရွင္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး အမ်ားႀကီးေတြ႕ ရဦးမွာ ” ၂။ တစ္ဟုန္ထိုးစီးဆင္းေနတဲ့ အခ်ိန္ အခ်ိန္က ေရထက္ေတာင္မွ စီးဆင္းတာျမန္ေသးတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ လုပ္စရာရွိတာကိုျမန္ျမန္လုပ္၊ ႀကိဳးစားစရာရွိတာ ျမန္ျမန္ႀကိဳးစား၊ ကိုယ့္ပခုံးထက္ကတာဝန္ ကိုယ္ေက်ေအာင္လုပ္။ “ အသက္ရွင္ေနၿပီး လႈပ္ႏိုင္ေသးခ်ိန္မွာ အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးထားပါ ” ၃။ သင့္ကိုေက်ာခိုင္းထားတဲ့နံရံ သင့္ကိုေက်ာခိုင္းထားတဲ့နံရံက သင့္ကိုဘယ္လိုမွ အသက္ရႈလို႔မရေအာင္လုပ္မယ္၊ သင့္မွာ …
လက်မထပ်ခင်သင့်ချစ်သူကို မေးကြည့်သင့်တဲ့ မေးခွန်း(၁၅)ခု….
လက်မထပ်ခင်သင့်ချစ်သူကို မေးကြည့်သင့်တဲ့ မေးခွန်း(၁၅)ခု…. အိမ်ထောင်ပြု၊ ဘုရားတည်၊ ဆေးမင်ရည်စုပ်ထိုးဆိုတာက ပြုလုပ်ပြီးရင် ပြန်ပြင်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အရေးကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲကမှ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဟာ သင့်ဘဝအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ သင့်ရဲ့ဘဝတစ်ခု လုံးကို အတူကုန်ဆုံးဖို့၊ အရာရာအားလုံးကို ဝေမျှခံစားဖို့၊ ပေးဆပ်တတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတာက စိုးရိမ်စရာဖြစ်သလို စိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်းကောင်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှန်ကန်စေဖို့အတွက် သင့်ရဲ့ဘဝလက်တွဲဖော်ဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းထားသူကို ဒီမေးခွန်းတွေ မေးကြည့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ၁။ အိမ်ထောင်ပြုပြီး ကလေးယူဖို့ အစီအစဉ်ရှိမရှိ ဒီမေးခွန်းက အရေးကြီးပါတယ်။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ကလေးရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းက အပြောင်းအလဲတွေ အများရှိဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးယူဖို့ အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်အချိန်ယူမယ်၊ …
အဖြူရောင် ကိုကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေမှာရှိနေတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားများ
အဖြူရောင် ကိုကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေမှာရှိနေတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားများ အဖြူရောင်ကို ကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေမှာ ရှိနေတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားများ အင်းကျီကို ဝယ်မယ် စိတ်ကူးလိုက်တိုင်း အဖြူရောင်ကိုပဲ မျက်စိအမြဲ ကျနေတတ်တဲ့ သူတွေရှိပါတယ် အဖြူရောင်တွေကို တမင်ရွေးတာတော့ မဟုတ်ပေမယ့်လည်း အဖြူရောင်ကိုမှ ကြည့်အကောင်းဆုံးနဲ့ သဘောအကျဆုံး ဖြစ်နေတာကြောင့် သူတို့ရဲ့ အဝတ်တွေမှာ အဖြူတွေကပိုပြီး များနေလေ့ရှိပါတယ် ဒီလိုအဖြူကိုမှ တခြားအရောင်တွေထက် ပိုကြိုက်လေ့ ရှိတဲ့ကောင်မလေးတွေမှာ ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ် ( ၁ ) စိတ်ရိုးရှင်းတယ် စိတ်ပညာအရ အဖြူရောင်က ရိုးရှင်းမှု၊ အပြစ်ကင်းစင်မှုနဲ့ ပြီးပြည့်စုံမှု စတာတွေကို ကိုယ်စားပြုထားပါတယ် အဖြူရောင် ကြိုက်သူ အများစုကလည်း ရိုးရှင်းမှုကိုနှစ်သက်ပြီး စိတ်ထား ကြည်လင်ကြပါတယ် …
ဘဝကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ စိတ်ချမ်းသာအောင် နေချင်တယ်ဆိုရင် လိုက်နာသင့်တဲ့ အရာများ ဘဝဆိုတာ ရှင်သန် ရုန်းကန်းရတာ ခက်ခဲပါတယ်။ လူတိုင်း ဘဝအတွက် ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်း လှုပ်ရှားနေရတာကြီးပါပဲ။ သင့်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး ၊ ရုန်းကန်း လှုပ်ရှားနေရင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်အောင် နေချင်ရင် ဒီအရာတွေကို လိုက်နာပေးပါ။ (၁) သင့်ဘဝထဲကနေ မကောင်းတဲ့ သူတွေကို ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ သင့်ဘဝထဲမှာ သင့်အပေါ် မကောင်းတဲ့သူတွေကို ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ရင် သင်အရမ်းကို စိတ်ချမ်းသာနေပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နေသွားရမှာပါ။ သူတို့ သင့်အပေါ် မကောင်းရင် သူတို့နဲ့ ရှောင်လိုက်ပါ ။ သင့်ကို ချစ်တဲ့သူတွေ ရှိတဲ့အရပ်မှာပဲ နေပါ။ (၂) သင့်ကိုယ်သင် အာရုံစိုက်ပါ …
နဖူးပြောင်သူတွေရဲ့ သူများနဲ့မတူဘဲ ကွဲပြားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အားသာချက်တွေ . . . နဖူးကျယ်တဲ့သူလေးတွေကို သူငယ်ချင်းတွေက ပြောင်ကြီးလို့ ခေါ်ပြီး စနောက်တတ်ကြတာကြောင့် အများစုက ဆံမြိတ်လေးတွေနဲ့ နဖူးကျယ်ကျယ်တွေကို ဖုံးအုပ်ထားတတ်ကြပါတယ် တကယ်တော့ နဖူးကျယ်တယ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာရပ်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ဒီလိုထူးခြားချက်မျိုးတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါနော် (၁) ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်တယ် သူတို့တွေဟာ တခြားသူတွေကို မှီခိုတာထက် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ရပ်တည်ပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်ကြတဲ့သူလေးတွေဖြစ်ပါတယ် အခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်တိုင်ကြိတ်ဖြေရှင်းနေတတ်ပြီး တခြားလူတွေကိုအကူအညီတောင်းဖို့ ဝန်လေးတတ်တဲ့သူတွေပါ (၂) လွယ်လွယ်နဲ့မပြိုလဲတတ်ဘူး တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် မရရအောင်လုပ်တတ်တယ် ဘယ်လိုအတိုက်အခိုက်မျိုးတွေနဲ့ပဲကြုံရပါစေ လွယ်လွယ်နဲ့ပြိုလဲမသွားဘဲ ကြံ့ကြံံ့ခံနိုင်တဲ့၊ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့သူလေးတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ် (၃) ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်တာကိုမုန်းတယ် လွတ်လပ်တာကိုကြိုက်တယ်၊ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တတ်တယ်၊ ကိုယ့်ကို …